Guddiga Dib-u-heshiisiinta Gobalka Gedo oo gaaray magaalada Kismaayo (Sawirro) – Idil News
Guddiga Dib-u-heshiisiinta Gobalka Gedo oo gaaray magaalada Kismaayo (Sawirro)
Posted By: Jibril Qoobey July 18, 2021
Guddiga xalinta khilafaadka arrimaha gobolka Gedo ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee Dowladda Jubbaland.
Guddiga oo ka kooban wasiiro ka kala socda Dowlad Goboleedyada Dalka sida Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed, iyo Hirshabeelle ayaa yimid magaalada Kismaayo si ay ula kulmaan masuuliyiinta iyo madaxda Jubbaland, Odayaasha dhaqanka, iyo siyaasiyiinta iyo wax garadka kaso jeeda Gobolka Gedo ee ku sugan Kismaayo.
Guddiga ayaa markii ay kaso dageen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo, kaddib loo gudbiyay madaxtooyada Jubbaland halkaas oo ay kulan kula yeesheen madaxwayne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aaden.
Kulanka ayaa isugu jiray soo dhaweyn iyo kala war qaadasho, waxaana uu guddigu ugu horreyn ka warbixiyay waxyaabihii u qabsoomay mudadii ay ku sugnaayeen magaalada Garbahaarrey ee xarunta Gobolka Gedo.
Guddiga ayaa warbixin ka dhagaystay madaxwayne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland, waxaa uunawarbixin qoto dheer ka siiyay marxaladihii ay soo martay Jubbaland iyo sida ay Jubbaland ugashay dadaal dheer sidii xal waara loogu heli lahayd arrimaha ka taagan Gobolka Gedo, iyo sida ay waxbadan uga tanaasushay si dalku u galo doorasho.